Bandhig Faneedkii 127aad ee Canton Fair | Midka
Bandhigga Canson Online 127aad ee 127aad
50 goobood oo bandhig internet ah oo leh 24-saac adeeg, 10 × 24 bandhig qol baahin oo gaar ah, 105 goobood oo iskutallaab ah oo xaduud ah iyo 6 isku xir oo iskutallaab isweydaarsi e isku xirxiran ayaa isla mar si rasmi ah loo bilaabay… Bandhigga 127-ka Canton Fair ayaa furmay 15th, Juunyo, oo ah calaamadda bilowga dhacdo ganacsi oo internetka ah oo jebisa xuduudaha waqtiga iyo bannaan.
Kani waa kulan lagu kalsoon yahay. Saamaynta COVID-19 ee dhaqaalaha adduunka iyo ganacsiga ayaa wali muuqda. The "daruur" Canton Fair ayaa la furay, iyadoo la siinayo meel loogu talagalay iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ganacsatada caalamiga ah. Kumanaan kun oo soo bandhigayaal Shiinaha iyo shisheeye ah ayaa raadinaya fursado ganacsi iyo horumar, kalsooni dheeraad ah.
Tani waa shir hal-abuurnimo. "Cloud" Canton Fair waxay u qaadataa tikniyoolajiyad cusub fursad cusub oo loogu talagalay moodooyinka cusub iyo qaababka ganacsi ee cusub sida gorgortanka khadka tooska ah, bandhigyada tooska ah, gudbinta tooska ah iyo ganacsiga e-commerce. Waa la sii daayay, waxaana soo saarkii Shiinaha iyo hal-abuurnimada Shiinaha halkan ka tagtay adduunka.
Annaga ahaan, kani maahan caqabad kaliya, xitaa fursad, waxaan u dhisnaa baahin toos ah
Bandhigga Canton Fair ma aha caqabad kaliya laakiin sidoo kale waa fursad noo ah. Iyada oo la raacayo hagida iyo hagida kooxda ganacsiga Tianjin, waxaan si guul leh u bilownay shaqada internetka ee hoolka Bandhigga Cloud Cloud muddo laba bilood gudahood ah, waxaan baranay oo aan sahamnay nafteena, aasaasay goob warbaahin toos ah, waxaanan diyaarinay "props" kala duwan oo baahinta tooska ah iibka ka iibsashada. of qalabka baahinta tooska ah: Diyaarinta muunadaha, baakadaha, iyo aaladaha, qoraallada si aad wax uga beddesho mar labaad iyo mar labaad, dhamaadka xiisadda dhaqanka tooska ah, kooxdeena qof walbaa wuxuu ku qaatay isbadal cusub, horumarinta bulshada, qaab cusub ee baahinta leh nooca iibka xamuulka ayaa ah inay u ogolaato qof walboo iibkiisa ah inuu yeesho isbedel cusub, laakiin sidoo kale feejignaanteena, waxaan dooneynaa inaan si fiican wax u qabanno, si aan ula qabsanno isbeddelada bulshada ay tahay inaad si joogto ah wax u baratid, oo aad naftaada beddesho.
Shan maalmood waxaan noolaannay 12 kulan, waxaan helnay ku dhawaad ​​120 weydiimaha macaamiishaas waa dadaalka guud ee kooxdeena, sidoo kale waxaan aaminsanahay in shanta maalmood aan sameyn doono natiijo fiican, isla mar ahaantaana, waxaan u mahadcelineynaa macaamiisha cusub iyo kuwa da'da ah ee taageera, Waxaan sii wadi doonnaa horumarka waxbarashada, alaabada ugu fiican, qiimaha ugufiican iyo adeegga kuugu fiican adiga, mar labaad waad mahadsantahay